Golaha afhayeennada xeer-dejinta dalka oo isku cannaantay habacsanaanta fulinneed ee nuxurka shirarkooda – Kalfadhi
April 10, 2019 April 10, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
War-murtiyeedka shirkii mudada saddexda cisho ah Garowe uga socday afhayeennada golayaasha sharci-dejinta dalka ayaa si weyn loogu lafa-guray fullinta waxyaabaha ka soo baxa shirarkaas oo habac ka jiray hirgelintooda, marka dib loo milicsado afartii shir ee hore.
Gudoomiye xigeenka labbaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad ayaa warbaahinta maxaliga ah u sheegay in arrintaas si adag la isugu cannaantay isla markaasna si gaar ah golaha shacabka looga filayo in ay kaalin weyn ka ciyaaraan wax ka bedelka caqabadan.
“Qolo walba waxay gaabis ku noqotay baa lagu cannaantay, golaha shacabka weliba waajibaad gaar ah ayaa saaran oo la doonayo inaan Muqdisho ku noqono oo aanu hordhigno golaha, maadama wax weyn laga sugayo golaha shacabku inuu la wadaago golayaasha,” ayuu yiri Cawad
Wada-shaqaynta iyo waxyaabaha ay golayaashu iska kaashan doonaan ayaa si balaaran loogu faahfaahiyay qodobka 10naad ee war-murtiyeedka, waxaana lagu qoray sidan;
“Waxaa kulankan lagu guddoonsaday in golaha shacabku dardargeliyo xoojinta xiriirka wada-shaqaynta guddiyada golayaasha ee isku shaqada ah, sare u qaadidda tababarada wadajirka ah ee xubnaha iyo shaqaalaha golayaasha, aqoon-isweydaarsiga iyo xog-isweydaarsi ku dhisan in gole walba garab ku siiyo golaha uu ka hor dhismay ama ka khibrad iyo tayo roonyahay” ayaa lagu yiri war-murtiyeedka.
Wada-shaqaynta golayaasha xeer-dejinta dalka waxaa saamayn ku yeeshay sannadkii hore khilaafkii u dhexeeyay golaha iskaashiga dowlad-goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxayna xilligan golayaasha xeer-dejintu filayaan in ay boorka ka jafaan iskaashigooda.